Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda Waqooyiga Itoobiya | Dhacdo
Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda Waqooyiga Itoobiya
Ciidamada Federaalka Itoobiya ayaa horey ugu sii socdo Magaalada Mekelle ee Xarunta Maamulka Tigreyga, ee ka dhisan Waqooyiga Itoobiya.
Ciidamada Militariga oo wata taangiyada dagaalka ayaa isku dayaaya inay hareereeyan Magaalada Mekelle, oo ay ku nool yihiin in ka badan laba boqol oo kun oo qof.
Taliska Militariga Itoobiya ayaa maanta sheegay inay suurtagal tahay in madaafiic lagu garaaco Magaalada Mekelle, si meesha looga saaro Xisbiga TPLF ee magaaladaasi ka arrimiya.
Militariga ayaa dadka deegaanka uga digay inay waxyeelo ka soo gaarto madaafiicdaasi, iyadoona uu baaqoodu yahay inay magaalada isaga baxaan.
Dhanka kale waxaa maanta Magaalada Addis Ababa gaaray ergada dhexdhexaadinta ee Midowga Afrika, uu shalay u magacaabay colaadda ka taagan dalkaasi. Ergada waxaa loo magaacaabay dhexdhexaadinta Dowladda Federaalka iyo Maamulka Tigreyga.
Ergada oo saddex xubnood ka kooban ayaa waxay kala yihiin Madaxweynihii hore ee Mozambique, Joaquim Chissano, Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika, Kgalema Motlanthe iyo Madaxweynihii hore ee Laberia, haweeneyda lagu magacaabo Ellen Johnson-Sirleaf.
Ergada ayaa lagu wadaa inay Magaalada Addis Ababa kula kulmaan Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed, iyagoona ka dalban doono in dagaalka la joojiyo, isla-markaana uu u ogolaado inay u safraan Gobolka Tigreyga, si garabka kale ay ula kulmaan.
Mamo Mihretu oo lataliye sare u ah Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed ayaa sheegay in ergada ay la kulmi doonto oo keliya Ra’iisal Wasaaraha, isla-markaana aan loo ogolaan doonin inay u socdaalaan Waqooyiga Itoobiya.
Mamo Mihretu ayaa sheegay inaanay la xaajoon dembiile-yaasha, balse taasi bedelkeeda ay calaaladda mariyaan, isagoo ergada u sheegay in doorka ay arriintan ka cayaari karaan ay tahay in TPLF ka dhaadhiciyan inay isa soo dhiibaan.
“Dembiile-yaasha lama xaajoono, taasi bedeleeda cadaaladda ayaan marinaa, oo lama fariisano miiska wadahadalka, waa go’aan ay gaartay xukuumadda. Waxaan filleynaa in walaalahayaga African-ka ah ay door muhiim ah ka cayaari karaan xaaladda taagan, waa haddii ay xubnaha TPLF ku cadaadiyaan inay isa soo dhiibaan.” Ayuu yiri Mamo Mihretu.
Mihretu oo la hadlay BBC ayaa yiri “Deegaanka Tigreyga waxaa hadda ka socdo hawlgal militari, kaasoo aan rajeynayno in dhawaan la soo afjari doono. Haddii TPLF ay dooneyso in la soo afjaro colaadda waxa keliya ee u furan waa in si nabdoon isu soo dhiibaan. Marka ma jirto cid u baahan inay tagto Tigray ama Mekelle, si ay arrintaasi uga dhaadhiciso TPLF.”
Xukuumadda Addis Ababa ayaa weli ka biyo diidan baaqyada lagu doonayo inay dagaalka ku joojiso, khilaafka jiraana lagu dhammeeyo miiska wadahadalada.